Shiinaha warshadda daboolka kululaynta kululaynta iyo soosaarayaasha | Huanyi
Waxyaabaha: maro satin daahan PVC farcan
Cabir: Dhexroor 47cm, 600g
Midabka: casaan joogto ah, midab ayaa loo habeyn karaa haddii tirada ay ka badan tahay 2000pcs
Isticmaalka: Shaambooga ka dib, kariimka kareemka dubista si siman u isticmaal, xidho daboolka qubeyska la tuuri karo, kuleylka daboolka dubista kuleylka dhexdhexaadka ah ee microwave 2-3 daqiiqo. Marka heerkulku yahay qiyaastii 35-45 digrii, xidho illaa 15 daqiiqo. Ku habboon perm, daryeelka dheeha ka dib, iyo dayactirka tayada timaha maalin kasta.
Isticmaalka:Shaambooga ka dib, kariimka kareemka dubista si siman u isticmaal, xidho daboolka qubeyska la tuuri karo, kuleylka daboolka dubista kuleylka dhexdhexaadka ah ee microwave 2-3 daqiiqo. Marka heerkulku yahay qiyaastii 35-45 digrii, xidho illaa 15 daqiiqo. Ku habboon perm, daryeelka dheeha ka dib, iyo dayactirka tayada timaha maalin kasta.
1. 10 Sano oo Khibrad ah OEM, ODM, Midab gaar ah, astaan, baakado. Waxay ku siin karaan talo bixinno xirfad leh oo ku saabsan adeegsiga iyo kaydinta, si looga fogaado daadashada ama caaryada.
2. Warshaddu waxay leedahay in ka badan 20 Khadadka Waxsoosaarka, Mashiinka daabacaadda UV, Aqoon isweydaarsiga Silkscreen wuxuu la kulmi karaa shuruudahaaga astaanta, waxaan sidoo kale caado u nahay bacda waajibka ah annaga qudheennu si cad ayaan u xiraneynaa koofiyaddaada.
4.For kuwa gel gel cap cap size yar yar oo aad u dhagan ayaa laga yaabaa inuu ku raaxeysto, warshadeena waxay leeyihiin cabbirro waaweyn oo kala duwan oo aad dooratay, waxay ku haboonaan karaan dad badan.
Hore: Soo-saare Baakadaha Baakadka Dhalashada Kadib - Carruurta baakadka barafka - Huanyi
Xiga: Garab duub baakad baraf ah
Cap Qaboojiye Qoto Dheer
Kululaynta Gel Cap
Daboolka kululeeyaha kulul